फाफुरा १७ फिभर–ए–भकुन्डो
बाह्रखरी - ब्रजेश खनाल मंगलबार, असार १२, २०७५
पानामाविरूद्ध बेलायतको भकुन्डो र सिन्डिकेटविरूद्ध सरकारको लडाइँमा के समानता छ थाहा छ ? खेल फरक भए पनि दुवैमा एउटै नतीजा आएको छ । अब सरकारसँग पेपे वा रामोस त छैनन् जसले गोल हान्न आउनेका नली खुट्टामा बाँसुरी बजाउन सकून् ! त्यसैले यता सरकारले एक गोल हान्दा उता सिन्डिकेटेहरूले ‘काउन्टर अट्याक्मा छ गोल बजाइदिए् । त्यही जितको विजयोन्मादले हर्षित सार्वजनिक यातनायातका चालक र सहचालकहरू चक्रवर्ती सम्राटजस्ता भएका रहेछन् । पहिले पैंतालीस यात्रु खाँद्ने माइक्रोहरू अब पचपन्न नखाँदी नमान्ने भएका रहेछन् । गुन्द्रुक खाँदिए जसरी खाँदिएर बल्लबल्ल निस्सासिँदै सहीदगेटसम्म पुग्दा फाफुराको सहनशक्तिले आत्मसमर्पण गर्‍यो । अब यो भन्दा पनि अघि गयो भने त बीचमै उसको आत्मा परमात्मासँग चिरमिलनका लागि अनन्तयात्रामा लाग्नेछ र रत्नपार्कमा उसको नश्वर शरीरमात्र माइक्रोबाट ओर्लनेछ भन्ने फाफुरालाई लाग्यो । त्यसैले ऊ त्यहीँ ओर्लियो । रत्नपार्कमा सिट पाइन्न भनेर सहीदगेटबाटै चढ्न कुरेका दूरद्रष्टाहरूको भित्र छिर्ने होडबाजीका कारण फाफुरालाई माइक्रोको गर्भबाट बाहिर निस्कन आमाको गर्भबाट संसारमा निस्कँदा भन्दा कठोर संघर्ष गर्नुृ पर्‍यो । केही बेर लामोलामो सास फेरेर आफूलाई नियन्त्रण गरेपछि ऊ फेरि उत्तरतिर लाग्यो । रत्नपार्कनिर पुगेर ऊ टक्क अड्यो ।
मंगलबार, असार १२, २०७५ मा प्रकाशित